vata fampangatsiahana kilasy ara-barotra |Nenwell-China
Momba an'i Nenwell
Antsoy izahay anio
vata fampangatsiahana fitaratra misy lafiny 4
Fanamafisana fampisehoana gilasy
Cooler Barrel marika
vata fampangatsiahana Supermarket
Nenwell dia manolotra vahaolana OEM sy ODM foana mba hanampiana ny mpanjifa amin'ny indostrian'ny sakafo sy ny varotra mividy sy mampiasavata fampangatsiahana kilasy ara-barotraaraka ny tokony ho izy.Ao amin'ny lisitry ny vokatray dia sokajianay ao anaty vata fampangatsiahana ara-barotra sy vata fampangatsiahana ara-barotra ny vokatray, saingy mety ho sarotra aminao ny hisafidy izay mety amin'izy ireo, tsy maninona izany, misy famaritana bebe kokoa eto ambany ho anao.
vata fampangatsiahana ara-barotradia nofaritana ho vondrona mangatsiaka kokoa izay ahafahan'ny rafitra fampangatsiahana afaka mifehy ny mari-pana eo anelanelan'ny 1-10°C, ampiasaina betsaka amin'ny fampangatsiahana ny sakafo sy ny zava-pisotro mihoatra ny 0°C mba hitazonana azy ireo ho vaovao.Ny vata fampangatsiahana ara-barotra dia matetika sokajiana ao anaty vata fampangatsiahana aseho sy vata fampangatsiahana.vata fampangatsiahana ara-barotraMidika hoe fitaovana fanamafisam-peo izay ahafahan'ny rafitra vata fampangatsiahana mahafehy ny mari-pana eo ambanin'ny 0°C, matetika izy io no ampiharina amin'ny fampangatsiahana ny sakafo mba hijanonana amin'ny toerana mangatsiaka mba hitazonana azy ireo ho vaovao.Ny vata fampangatsiahana ara-barotra dia matetika sokajiana ho Display Freezer sy Storage Freezer.
Biraon'ny labiera swing tokana ara-barotra & tavoahangy fisotroana Coke Back Bar Cooler Fridge
Fanjifana angovo ambany sy feo ambany.
Fanaraha-maso mari-pana nomerika.
Toeram-pisotroana varavarana vera mihodinkodina roa ara-barotra sy tavoahangy divay ao ambadiky ny vata fampangatsiahana mangatsiaka kokoa
Eo ambanin'ny Counter Single Swing Varavarana Mafy Zava-pisotro mangatsiaka & Bear Back Bar Fitehirizana vata mangatsiaka mangatsiaka
Varavarana mivaingana tokana ao ambadiky ny vata fampangatsiahana mangatsiaka.
Tambonin'ny vovoka misy vovoka avo lenta.
Varavarana Mafy Indroa Kely Fisotroana Mangatsiaka sy Fisotroana Back Bar Cooler Fridge
Varavarana swing vita amin'ny fitaratra telo misy hidin-trano.
Zava-pisotro labiera matevina telo sosona sy zava-pisotro mangatsiatsiaka ao ambadiky ny vata fampangatsiahana
Varavarana sliding tontonana dia vita amin'ny fitaratra tempered.
Fivarotana entam-barotra Plug-In Multideck Display sy Fitehirizana Chiller Fridge misy varavarana fitaratra ho an'ny legioma
Famolavolana ridao misokatra.
Glass misy insulation mafana.
Naorina-in condensing unit
Miaraka amin'ny rafitra fampangatsiahana mpankafy.
Fahafahana fitahirizana lehibe.
Ho an'ny fitehirizana sy fampiratiana voankazo sy legioma.
Mifanaraka amin'ny refrigerant R404A.
Rafitra fanaraha-maso nomerika sy efijery fampisehoana.
Misy safidy habe samihafa.
5 tokotanin'ny talantalana azo amboarina anatiny.
Fampisehoana avo lenta sy maharitra.
Stainless vy Premium miaraka amin'ny kalitao avo lenta.
Misy loko fotsy sy hafa.
Ny compressor amin'ny feo sy angovo ambany.
Varahina fantsona evaporator.
Boaty jiro ambony ho an'ny doka.faneva.
Side vera misy insulation mafana.
Naorina-in condensing unit.
Ho an'ny fitahirizana zava-pisotro sy fampirantiana.
6 decks ny anatiny Adjustable talantalana.
Plug-In-Multideck Open Air Curtain Drink Merchandiser vata fampangatsiahana ho an'ny fivarotana fivarotana lehibe
Ho an'ny fitehirizana sy fampisehoana zava-pisotro any amin'ny toeram-pivarotana lehibe.
123456Manaraka >>> Pejy 1/20
Sitemap|© Copyright - 2016 - 2022 By NENWELL Refrigeration.Zo rehetra voatokana.